China Họrọ nri sports nri; Ekwela pụta gị mmega! Emeputa na Supplier | Bracefactory
cervical olu akwa
Upper N'ịdị nkwado
mkpịsị aka splint
Ala N'ịdị nkwado
na-agbanwe n'ikpere aka
Matarasị & cushions
ndị ọzọ na ngwaahịa
Silicone ụkwụ ILEKỌTA
Insoles & pad
Na-ahọrọ nri sports nri; Ekwela pụta gị mmega!
Nutrition Mmeju tupu mgbe ihe omumu ndị dị nnọọ ka mkpa dị ka mmega onwe ya. Ọ bụrụ na ị na-achọghị iji protein ntụ ntụ dị ka nanị ekwukwa n'akwụkwọ emeju, ihe oriri nwere ike inyere anyị aka mma anụ ahụ arụmọrụ n'oge omumu na weghachite nkịtị ike mgbe ihe omumu?
Australian nutritionist Zoe Bingley-Pullin kwuru carbohydrates bụ ndị kasị mma isi iyi nke ike Mmeju tupu mmega ahụ, na freshly squeezed ihe ọṅụṅụ ma ọ bụ dum na-wheat crackers nwekwara ezi nhọrọ. Mgbe ihe omumu, na-eri na-akpata akwụkwọ nri ndị dị otú ahụ dị ka carrots na ụtọ poteto KA enyere iji weghachi ike.
Australian nutritionist Zoe Bentley-Pullin kwuru na oke nke nri na-adabere na ụdị mmega. Ọ bụrụ na ị na-aga mgbatị, ọ dị mkpa na-eri ihe n'ihu. Na a blog post, Zoe kwuru na carbohydrates bụ ndị kasị mma isi iyi nke ike Mmeju tupu mmega, na-enye ndị dị mkpa ike maka mmega.
Otu ma ọ bụ abụọ iberibe mkpụrụ osisi, a nkeji iri na ise cup of mbuaha akọrọ mkpụrụ osisi ma ọ a cup of freshly-squeezed mkpụrụ & akwukwo nri ihe ọṅụṅụ nwere ike enyere gị aka inwetaghachi ume. Ke adianade do, ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ime elu-ike egwuregwu ndị dị otú ahụ dị ka weightlifting, otu ma ọ bụ abụọ iberibe dum na-ọka crackers, osikapa achịcha ntekwasa na nut butter ma ọ bụ ricotta nwere ike inyere imeta mma mma.
N'otu aka ahụ, nri diets mgbe ihe omumu bụ isi ihe na-eweghachiri ike. Ndị ọkachamara na-atụ aro na 30-60 nkeji mgbe ihe omumu bụ oge kacha mma idochi ike. Zoe kwuru na mgbe ihe omumu, o kwesịrị ekwesị na-eri oriri ọgaranya carbohydrates na protein.
Ọ bụrụ na ị na-enweghị oge zuru ezu iji kwadebe nri, ụfọdụ ngwa ngwa snacks nwere ike ịbụ a ezi nhọrọ, dị ka aku cereal Ogwe, mkpụrụ osisi na akwukwo nri emee ka anya doo ma ọ bụ elu-protein yogot na mbuaha mịrị amị mkpụrụ. Ke adianade do, karọt, ụtọ nduku na ndị ọzọ mgbọrọgwụ akwụkwọ nri plus hummus ma ọ bụ ricotta, ma ọ bụ a sie egg na a ole na ole crackers ma ọ bụ osikapa achịcha pụrụ inwe otu mmetụta.
Post oge: Jun-11-2019
Tinye: F8, Bldg 1 Anchi Road, Jiading 201805, Shanghai
Olee otú obibi gbajiri ụkwụ nkwonkwo?
Na-ahọrọ nri sports nri; adịghị gi ...
Bụ agbahapụ a ga mgbe mgbehu Joint spren?
Anọ Key Points maka Hiking Easily enweghị ...
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. Atụmatụ - Hot Products - Sitemap - IGBOB Mobile
lumbar nkwado , Mkpakọ mgbehu emem nkwado, na-agbanwe ikpere, mgbehu emem nkwado, Na-agbanwe ikpere emem nkwado, Sport ikpere emem nkwado ,